Simenitra Micro + Rattan, Mampiasà Texture Hamorona Ny habakabaka | HURD DESIGN - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Simenitra Micro + Rattan, ampiasao ny firafitra hamoronana atmosfera habakabaka | DESIGN HURD
2021 / 08 / 14 FisokajianaInterior design 3869 0
Rehefa mihena ny singa rehetra, ny antsipiriany rehetra sy ny fifandraisana rehetra amin'ny zavatra iray dia ahena ary voafintina amin'ny fotony. Hanana an'io toetra io izy, izay vokatry ny fanesorana ireo singa tsy ilaina.
Ny tompon-trano amin'ity tranga ity dia mpamorona endrika anatiny, karazana mpiara-mianatra amintsika. Vady maharitra izy izao. Satria mbola tanora ny zanany dia mandany an-trano mandritra ny andro izy. Izany dia manome fotoana bebe kokoa an'ny tompon-trano hampivelatra ny fialamboliny, ny famakiana, ny asa-tànany, ny Peking Opera, ary ny hosodoko.
Ho an'ity fanavaozana ity, ny tompon-trano dia nanisy fiheverana bebe kokoa ny filan'ny trano sy ny olona. Tiany ny tranony mba “tsy voafatotry ny fomba, fa manana toerana ampy hampivelatra ny fialamboliny. Ny habaka dia voadio amin'ny fahatsorany, mangarahara ary mafana. Afaka mahazo aina bebe kokoa ny olona eny amin'ny habakabaka. ”
Manaja tanteraka ny fanirian'ny tompon-trano izahay. Ny habakabaka dia tsy voaravaka be loatra, ary ny habakabaka dia noforonina tamin'ny alàlan'ny firafitry ny haingon-trano ihany. Mifantoka amin'ny fandanjalanjana ny fifandraisana eo amin'ny habaka sy ny habaka ary ny olona izahay. Nanomboka tamin'ny antsipiriany izahay mba hamoronana atmosfera fandraisam-bahiny mahafinaritra. Ny mamorona trano ho an'ny tompon-trano dia an'ny loharanon'ny voninkazo paiso!
Fomban-drazana mamakivaky, ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsara sy miafina amin'ny antsipiriany
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsara sy miafina amin'ny antsipiriany
Raha dinihina ny fikatsahan'ny tompon-trano ny fahadiovana dia nisy fahasamihafana teo amin'ny fidirana sy ny gorodona anatiny. Nanangana faritra vovoka nalentika ilay mpamorona hanakanana ny tany tsy hiditra ao amin'ilay efitrano. Ny taila maizina dia ampiasaina ihany koa mba hamoronana tontolo iainana madio sy milamina.
Ny efitrano fisavana eo amin'ny sisiny fidirana dia manome toerana fitahirizana bebe kokoa ho an'ny mponina. Ny tsipika miova ao an-trano dia fohy ihany koa. Ny gorodona dia natao mba hampazava mazava tsara ny fizarazaran'ny habakabaka amin'ny indray mipi-maso.
Vakio ny efitrano fandraisam-bahiny nentim-paharazana ny fandaminana telo-tapa, miaraka amina seza tokana fa tsy seza lehibe sy lehibe. Mamelombelona kokoa ny habaka. Ny andalana manontolo amin'ny vata fampirimana misokatra namboarina mifanaraka amin'ny rindrina dia azo ampiasaina ho talantalana fampisehoana ho an'ny hosodoko sy ny bokin'ny tompony. Miaraka amin'ny firavaky ny boky sy sary hosodoko, ny efitrano fandraisam-bahiny dia manana rivo-piainana mahaolona kokoa.
Ny tampon'ny efitrano fandraisam-bahiny dia vita amin'ny simenitra bitika. Ny mpandrafitra dia nampiasa fisarahana loko mba hanokafana ny haavon'ny rindrina sy ny gorodona ary mifanaraka amin'ny tsipika maivana sy maivana. Ireo tsipika maranitra dia mampamirapiratra kokoa ny habaka.
Ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitra fisakafoana dia miorina amin'ny toerana iray ihany, ary ny ambony sy ny gorodona dia zarazaraina. Malalaka ny masoandro sy ny rivotra miditra ao amin'ny efitrano. Ny kabinetra fitehirizana overhanging dia voalamina amin'ny rindrina. Mety kokoa ny manadio ny faritra ambany. Etsy ambony ny kabinetra dia azo ampiasaina ho talantalana. Ny famolavolana sary, ny fitehirizana dia azo zaraina amin'ny sokajy samihafa.
Ny lavarangana dia tafiditra ao anatiny. Atsangano kely izy io mba hanavahana ny efitrano fandraisam-bahiny, ary zarao ny toerana hamakian'ilay tompon-trano sy an-tsary. Ireo elanelam-potoana roa dia tsy misaraka ara-batana, mamela toerana bebe kokoa ho an'ny fifandraisan'ny mpianakavy. Ny fotoana mahafaly ho an'ny ray aman-dreny sy ny zazakely ao an-trano dia ny filalaovan'ny ankizy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary ny reniny kosa manao sary sy mamaky amin'ny faritra misy azy, ary hitanao ny endrik'ireo ankizy mitsiky rehefa mijery ianao.
Fampidirana ny sakafo sy ny lakozia, mankafy ny fotoana fisakafoana amin'ny toerana avo kalitao fampidirana sakafo sy lakozia
Ny fandrindrana ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana dia mamorona tsipika mpifindra monina miaraka amin'ny lalantsara. Mety kokoa sy ahazoana aina kokoa ny fandrahoana sakafo sy ny fisakafoanana. Ny latabatra fisakafoana dia vita amin'ny marbra fotsy. Mifanohitra amin'ny hazo maizina ampiasaina amin'ny kabinetra fitehirizana izany, mampitony ny fahatsapana mavesatra amin'ny habaka. miendrika t, misy tsipika maranitra hamoronana toerana maivana.
Ireo seza fisakafoanana rattan + hazo dia mitondra fahatsapana hafanana, mahatonga ny rivo-pisakafoanana hiadana kokoa. Miaraka amin'ny chandelier monogrammed, ny sakafo rehetra dia mafana sy mahafinaritra eo ambanin'ny hazavana.
Ny efitrano fisakafoanana sy ny lakozia dia nalamina araka ny andry voalohany. Natambatra ny fisakafoanana sy ny lakozia, ary fohy kokoa ny tsipika fisakafoana sy ny lakozia. Rehefa vitanao ny mahandro dia afaka mandeha any an-dakozia ianao hankafy ny sakafo mafana avy hatrany. Ny kabinetra fitehirizana dia mivelatra manaraka ny rindrina, ary ny fitambaran'ireo endrika miafina sy miharihary dia mahatonga ny fitehirizana asa ho betsaka kokoa. Sady kabinetra fisakafoanana no faritra fitahirizana kojakojan-dakozia.
Raha mijery ny efitrano fisakafoana avy eo amin'ny lalantsara dia vaovao sy tsotra izy io. Ny skirting tsy hita maso dia miaraka amin'ny jiro manodidina anao hamaky ny lalantsara maizina sy tery. Mety amin'ny fiainam-pianakaviana izany ary mampiditra rivo-piainana mafana amin'ny habaka.
Toeram-pandriana mety sy mahazo aina
Raha mijery ny efitrano fandraisam-bahiny avy amin'ny lalantsara dia mihabe ny varavarana kely tery indrindra. Amin'ny fahitana dia milamina sy mirindra kokoa izy io. Ny tampon'ny lalantsara dia vita amin'ny fitaovana simenitra kely mitovy amin'ny efitrano fisakafoanana hitazonana ny fitohizan'ny toerana. Jiro miafina miafina dia ampiasaina ho toy ny jiro fampisehoana mba hahitana ny haavon'ny gorodona.
Ny fidirana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny efitrano fanamarinana sy ny trano fidiovana lehibe dia alamina milamina. Mazava ny fizarazarana ary ny endrika famolavolana suite mahatonga ny fiainan'ny tompony ho mora kokoa.
Ny rindrin'ny efitrano fatoriana dia rakotra veneer hazo. Ny fitaovana voajanahary dia mitondra firakotra sokajy avo lenta kokoa ho an'ny habakabaka. Ny rindrina ao ambadiky dia voaravaka volondavenona avo lenta, ary ny habaka dia misy sosona kokoa. Ny lambam-pandriana vita amin'ny hoditra dia manana kalitao bebe kokoa. Ny fisafidianana ny loko mavo sy maitso dia mahatonga ny rivo-piainan'ny efitrano fandraisam-bahana hihombo kokoa.
Ny efitrano fatoriana dia mampindrana toerana kely avy amin'ny efitrano fatoriana lehibe, mamela toerana fitahirizana ampy ho an'ny akanjon'ny fianakaviana. Fitaratra roa lava no apetraka am-baravarankely eo am-baravaran'ny lalimoara, izay mety amin'ny fanovana akanjo sy ny fanandramana akanjo. Raha mijery ny efitrano fatorianao avy eo amin'ny fitaratra, dia misimisy ny habaka ary feno fahalianana.
Voasarina mazava ireo zaridaina. Ny faritra lava akanjo dia miantoka tsy misy ketrona amin'ny akanjo. Ny faritra zarazaraina ambony dia mitahiry ny lambam-pandriana, lambam-pandriana ary akanjo ivelan'ny vanim-potoana. Ny vatasarihana ambany dia mitahiry tsy mifanaraka ary mifarana. Famolavolana mihidy mba hahazoana antoka fa tsy hianjera amin'ny vovoka ny fitehirizana. Avelao ny habaka am-baravarankely mba hamoronana faritra fisoloana akanjo mifangaro amin'ny kabinetra fitahirizana. Tsy manakana ny jiro ao an-trano izany, fa mahatonga ny efitrano fanamarinana ho maro hafa koa.
Ny fotsy no loko lehibe amin'ny efitra fandroana lehibe. Ny sasany amin'ireo rindrina dia voaravaka mainty, miteraka fahatsapana fahasarotana. Ny koveta dia lava-bato ao ambany ary azo ampiasaina ho toerana fitahirizana. Ny fampiasa amin'ny habakabaka dia avo indrindra amin'ny toerana kely.
Ny efitranon'ny ankizy sy ny fianarana dia novaina mba hanomezana toerana bebe kokoa ho an'ny ankizy hiala sasatra. Mandritra izany fotoana izany dia manakaiky ny efitrano fatoriana lehibe ny fandinihana, noho izany dia mora kokoa ho an'ny tompony ny mamaky boky alohan'ny hatory.
Ny lambam-pandriana sy ny lambam-baravarana ao amin'ny efitranon'ireo ankizy dia miloko mavokely maloto, mifanaraka amin'ny safidin'ny zazavavy kely. Tsy dia milay loatra ity. Ny rindrin'ny kabine fitehirizana iray manontolo dia mahatonga ny habaka fitahirizana bebe kokoa. Ny komparty misokatra ambany dia mety amin'ny fitahirizana kilalao ho an'ny ankizy.
Mampiasa hazo hamoronana fandalinana mangina
Birao tsotra no atsangana eo anelanelan'ny kabine fitahirizana sy ny rindrina eo akaikin'ny varavarankely. Ny faritra ambany amin'ny birao dia avela foana ho an'ny mpamaky hanenjana ny tongony. Misy jiro miafina roa apetraka eo an-tampon'ny jiro rehefa mamaky sy miala sasatra. Ny ridao fotsy eo am-baravarankely dia manivana hazavana ary miaro ny maso.
Ireo efitrefitra misokatra amin'ireo kabine fitahirizana dia samy hafa habe. Mety amin'ny fametrahana boky isan-karazany izy io. Ny endriny mirindra miaraka amin'ny birao dia mety kokoa amin'ny fihazonana sy fametrahana boky eo am-pelatanany. Ny locker dia vita amin'ny hazo miaraka amina endrika matanjaka, izay mameno ny toetra mangina sy kanto ananan'ireo boky. Ny birao dia vita amin'ny tontolon'ny vatolampy volondavenona avo lenta, izay manavaka ny fitoeram-boky ary manapaka ny monotony an'ny habaka.
Efitra fandroana telo misaraka, fiainana mety kokoa
Manova ny firafitry ny trano fidiovana, manao endrika telo misaraka hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana. Ampiasao ny zoron'ny habakabaka handaminana ny faritra maina. Ny varavarankely amin'ny lafiny roa dia mitondra hazavana ao amin'ny efitrano. Mety amin'ny rivotra izy io ary mamirapiratra ny habaka fa tsy mando. Ny milina fanasan-damba sy ny kabinetra fitehirizana lakozia dia natao hiverenana. Mandritra ny fiantohana toerana madio sy madio, dia mitombo ny faritra fitehirizana.
Ny faritry ny fandroana dia mampiasa tatatra lava, misy velaran-drano lehibe kokoa noho ny tatatra toradroa toradroa. Apetraka amin'ny rindrina mba hitazonana ny fahamendrehan'ny gorodona. Ny rindrina sy ny gorodona vita amin'ny gorodona dia natao 45 degre hametrahana hantsana. Eny amin'ny habakabaka dia manala ny olana amin'ny fanangonana rano.
Manova endrika ny habaka, mamorona fiainana manana kalitao
▲ Drafitra fandaminana
Ny fonosana palitao dia zarain'ny kabinetra fitehirizana ao amin'ny faritra fidirana, ka mora kokoa ny manova kiraro sy akanjo eo am-baravarana.
Ny rindrina mitondra dia ampiasaina ho toy ny axis handaminana ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fisakafoana ary hamorona tsipika misokatra sy mifindra monina. Mihetsika malalaka sy milamina kokoa ny olona eny amin'ny habakabaka.
Nopotehina ny rindrina mba hamoronana trano fidiovana faharoa. Ny faritra maina dia alamina eo am-baravarankely eo amin'ny zoron'ny habakabaka. Madio sy mety ny trano fidiovana, ary mangarahara kokoa koa ny habaka.
Ny fandinihana sy ny efitranon'ireo ankizy dia novaina mba hanomezana toerana natory mahafinaritra kokoa ho an'ny zazavavy sy hanatsara ny fizotran'ny fialam-boly an'ny tompony.
Nitarina ny efi-tranon'ny efitrano fatoriana ary nindraminy ny ampahan'ny efitrano fatoriana. Izy io dia mamorona efitrano fizahana misy asa maro, toy ny fitehirizana sy ny fitafiana, mifanaraka amin'ny filan'ny tompon-trano ny toerana fitehirizana azy.
Toerana misy ny tetikasa 丨 Shanghai, Sina - Distrikan'i Xuhui
Faritra tetikasa 丨 120㎡
Faritra tetikasa Court Fitsarana Hengan
Ekipa mpamorona 丨 Ny endriny
Fitaovana ampiasaina ： Vato hazo, marbra, simenitra kely, sns.
Ataovy amin'ny mari-pana ny endrika hamantarana ny trano am-pientanam-po
Previous :: Akrilika miloko maivana, mandika ny hatsaran'ny zavakanto amin'ny tontolon-karena ankehitriny | Yuanhe Daqian Next: Proposition kanto sy manankarena, mamolavola toerana onenana an-tanàn-dehibe | Drafitra SRDP
155㎡Ny habaka boribory, Taranaka telo miara-miaina tsy misy elanelana ...
2021 / 08 / 13 4156